Myanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State Counsellor | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State Counsellor
Myanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State Counsellor
Daw Aung San Suu Kyi, the State Counsellor of Myanmar, said in her address to the country on September 25 that the country has managed to hold its economy fromadownturn even though it is struggling due to the COVID-19.
“Some of our people are concerned about the future in terms of economy and jobs. As I have said before, we have considered those factors. When looking at the number, the volume of investments until September this fiscal year has surpassed the previous fiscal year’s investment volume. What I want to highlight is that even though we are struggling with the COVID-19, we are doing well, toacertain extent, in managing the economy not to decline,” she said.
According to data from the Ministry of Commerce, the volume of trade this year as of September is lower than that of the same period last year. However, she stressed that the country is in the position of reaching the trade volume of the previous year since there are three more months remaining until the end of the year.
“We are trying our best so that our people don’t need to worry about the future,” Daw Aung San Suu Kyi said.
Covid 19 ကပ် ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံ ရုန်းကန် နေရသော်လည်း စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမရှိစေရန် ထိန်းထားနိုင်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြည်သူများသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တချို့ပြည်သူတွေက အနာဂတ်အတွက် ပူပန်ကြတယ်ပေါ့နော်။ စီးပွားရေးအရ အလုပ်အကိုင်အရ ဒီကာလကြီးပြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ဆိုတာ အဲ့ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်မအရင်လည်း ပြောဖူးပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံတော်က ဒီဟာတွေကို ထည့်သွင်းပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ အခု ၉ လပိုင်းပဲရှိသေးပေမယ့် အရင်နှစ်ကထက်ပိုနေပါပြီ။ ပြောချင်တာက ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာတောင်မှ ကျွန်မတို့စီးပွားရေး သိပ်ပြီးတော့ မကျဆင်းအောင်လို့ ကျွန်မတို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ ထိန်းလို့လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အခြေအနေများအရ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အခြေအနေသည် ယခင်နှစ်ကအခြေအနေကို မမီသေးကြောင်း သို့သော်လည်း ကျန်၃လရှိသောကြောင့် မှီလုသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်ပြောသည်။
“ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပြည်သူတွေသိပ်ပြီးတော့ မစိုးရိမ်ရအောင်လို့ တတ်နိုင်သမျှ တော့ ကျွန်မတို့အားလုံးကြိုးစားတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံအတွင်း COVID -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက် ည (၈) နာရီတွင် MRTV ၏ ပြည်တွင်းသတင်း၌ ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Previous articleMyanmar foreign trade in good shape thanks to demands for crops
Next articleNIVEA Myanmar and City Mart with the Contribution of Customers Donate K16 Million to Fight COVID-19